Iibhoti zaBasetyhini, isiTsha ne-Autumn 2015, ifoto
Ngentwasahlobo, iibhotile ezintle kwaye zikhululekile ziyimfuneko kwi-wardrobe. Kule meko, kufuneka bahlangabezane nazo zonke iintlobo zefashoni zexesha, ezifanelekileyo phantsi kwemiyalelo yezitayela ezahlukeneyo, ezihambelana neengubo, iebhatyi kunye neengxowa, kunye njengawe. Ngaphandle kwesiqendu sethu, ukufumana into enjalo ingenangqiqo, ngoko hlala nathi kunye nokufumanisa okokufanele kube yiimfama zeemfesane zentombi Spring 2015.
Masiqale ngeebhotile ngezithende, ngoko sinikelwa inkululeko ekhethiweyo yokuzikhethela kunye nendlela yethu yokudala. Amantombazana athande umfazi kunye nococekileyo, ofana nesimboli esifana nesimboli, kuyafaneleka ukuzama kwiibhuthi eziphezulu kunye neenwele ezingenanto. Inokuxhaswa yinqonga (ukuphakama kwayo kuxhomekeke kumnqweno wakho wokumangalisa abanye). Izinto ezifunekayo mazibe yinto engavamile: i-denim, i-satin, i-velvet, isikhumba esincinci, iingubo. Kunokwenzeka ukuhlobisa ngohlobo lwe-lace, i-rhinestone ne-metal accessories. Imibala ifanele iqhaqheke: i-pinki, emhlophe, i-lilac.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iibhothi kufuneka zihlale ezinyaweni njengebhola lesibini kwaye ziphephe kakuhle ngaphezu kweedolo.
Inketho eyongezelelekileyo - iibhothi ezinezithende eziphantsi okanye i-flat sole. Intwasahlobo yokuqala ka-2015 kufuneka yenziwe nge-burgundy ephathekayo, e-brown, grey, okanye e-mustard, engagqithanga kakhulu ukuhlala ezinyaweni kwaye ngandlela-thile ifana nezicathulo ze-cowboy. Ubude - ngaphantsi kweedolo. Ukugqitywa kweMigunya kuvunyelwe njengoko kufana nesithombeni esilandelayo.
Ukuba ufuna ukudlala ngokungafaniyo, unokugqoka ilayiti ekhethekileyo "iisokisi" phantsi kweebhuthi. Xa i-frill iphuma kwi-bootleg ephakamileyo, ibonakala ibhence kwaye ifana nefestile yexesha le-19 leminyaka.
Imodeli engcono kakhulu yeebhotile zamabhinqa eneenqwelwana ezicwangcisiweyo ikhona "i-jockey", eyenziwe yesikhumba esineqabunga elinesibhakabhaka kunye ne-bootleg ephezulu. Bajonge ngokukhethekileyo ngeengqayi ezinqabileyo okanye ijeans ekhanda.
Izikhundla eziphezulu le ntwasahlobo ziza kuthatha iibhothi kwisiqonga kwisimbo se-70s. Iqonga kufuneka liphakame kwaye lihlanganiswe ngesikhumba okanye i-suede, kwaye i-bootleg ifanele ifike emadolweni. Ngokuqhelekileyo kwiiqoqo unokubona imihlobiso emcimbini: izimbobo ezifakiwe, imidwebo. Kufuneka ube nesibindi sokugqoka ezinjalo izicathulo.
Iimodeli zobugcisa zeebhotile zamabhinqa
Kweminye imizekelo evezwe ngexesha leveki yefestile eNew York, akunakwenzeka ukuba ungayithobeli ingqalelo. Okokuqala, izibhanqa ezigqithiseleyo zivela eRodarte. Yenziwe ngesikhumba esincinci, sinempumlo evulekile kwaye iphoxela yonke ixesha elide. Mhlawumbi oku akuyona indlela enhle yokwenza intwasahlobo (ingakumbi isiRashiya), kodwa umfanekiso onjalo uncedo luya kuba ngumbulali nje.
Indlu yefashini uGivenchi ithathe ingcamango evulekile kwiibhuthi kwaye ihobise le nkcukacha engavamile kunye neebhothi zakhe. Kwakhona, abaqulunqo befestile bawuthanda iirebhoni zokuhlobisa kunye nokuqhathaniswa nokuqhathaniswa.
Njengoko ubona, indawo yokuzibonakalisa kwintwasahlobo ka-2015 ingenamkhawulo. Siyaqiniseka ukuba uya kukhetha wena ngokwakho owona uphezulu kakhulu, kodwa kunye neebhoti zamabhinqa ezihle kakhulu kwaye zihle kakhulu.
Ukudlala iNkosana: kunye nokokugqoka ingubo kule nkwenkwezi
I-Topshop kunye ne-Topman baqala ukusebenzisana kunye noLamoda kwaye baqala ukuvela kwimakethi yaseRussia
I-Horoscope ngophawu lwe-zodiac kunyaka
Utamatisi kunye nekhilimu yeeshizi
Ukuphuhliswa kwamazinyo ekungondleki kakuhle kwabantwana
Iifu ezinamafutha omdaka